Ku Saabsan Isku-Beddelka Khadka Tooska ahOST) Fayl
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Ku Saabsan Isku-Beddelka Khadka Tooska ahOST) Fayl
Marka Muuqaalka loo adeegsado Microsoft Exchange Server, waad u dejin kartaa inuu kula shaqeeyo sanduuqa isweydaarsiga is-dhaafsiga. Waqtigaas, Muuqaalka ayaa koobi sax ah ka sameyn doona sanduuqaaga boostada ee Serverka Sarrifka, loona yaqaan faylalka qadla'aanta, oo ku kaydso feyl maxalli ah, oo la yiraahdo galka offline faylka oo leh a.ost kordhinta faylka. OST waa soo gaabinta "Shaxda Kaydinta qad la'aanta".
Markaad shaqeynayso khadka tooska ah, wax walba waad ku samayn kartaa faylalka khadka tooska ah sida haddii ay ahaan lahayd sanduuqa boostada ee serverka. Tusaale ahaan, waxaad u diri kartaa emayllo runti lagu ridayo Outbox-ka qadka, sidoo kale waxaad ka heli kartaa farriimo cusub sanduuqyada kale ee khadka tooska ah, waxaadna ku sameyn kartaa isbedel emaylka iyo waxyaabaha kale sida aad rabto. Si kastaba ha noqotee, isbeddeladan oo dhami kuma muuqan doonaan sanduuqaaga boostada ee serverka Sarrifka illaa aad ka xirmayso shabakadda mar labaad oo aad isla jaanqaadayso faylalka qadka ka baxsan ee serverka.
Inta lagu guda jiro hawsha iswaafajinta, Muuqaalka wuxuu ku xirnaan doonaa Serverka sarifka iyada oo loo marayo shabakad, nuqul dhamaan isbeddelada la sameeyay si fayllada qadla'aanta ay isku mid ugu noqdaan sanduuqa boostada markale. Waxaad dooran kartaa inaad isku dubbarido kaliya fayl gaar ah, koox fayl ah, ama fayl dhan. Faylka qoraalka ayaa loo isticmaali doonaa in lagu qoro dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan iswaafajinta, tixraacaaga dambe.
Laga soo bilaabo Muuqaalka 2003, Microsoft waxay soo bandhigaysaa Habka Isdhaafsiga Xayeysiinta, taas oo runtii ah nooca la hagaajiyay ee faylalka asalka ah ee asalka ah. Waxaa lagu soo qaatay farsamooyin is-waafajin wax ku ool ah iyo hawlgallo khadka tooska ah oo aad ugu habboon.
Fayllada qadla'aanta ama Koodhka Is-weydaarsiga Qarsoon wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah:
Kuu suurta geliso inaad ku shaqeysid sanduuqaaga Exchange Exchange xitaa ma jiraan xiriirro shabakadeed oo laga heli karo.
Markay musiibo ka dhacdo serverka sarrifka, sida shilalka serverka, musuqmaasuqa keydka macluumaadka, iwm, faylka faylka qad la'aanta ah ee kombiyuutarka maxalliga ah wali wuxuu ku jiraa nuqul ka mid ah sanduuqaaga Exchange, oo ay ku jiraan cusbooneysiinno khadka tooska ah ah. Waqtigaas, waad ka faa'iideysan kartaa DataNumen Exchange Recovery soo kabasho most waxyaabaha ku jira sanduuqaaga isweydaarsigaaga adiga oo iskaanaysanaya oo ka baaraandegaya xogta faylka galka ah ee khadka tooska ah ee maxalliga ah.
Faylka qad la'aanta ah (.ost) feyl, sida Faylka shakhsiyeed ee Muuqaalka (.pst) feyl, waxay caadi ahaan ku taalaa fayl horay loo sii qeexay.
Wixii Windows 95, 98 iyo ME, galka waa:
C: WindowsProfilesuser magacaXayeysiimaha Degaanka Codsiga DataMicrosoftOutlook
Wixii Windows NT, 2000, XP iyo 2003 server, galka waa:
C: Dukumiintiyada iyo Magaca isticmaaleha Goobaha Degaanka Codsiga DataMicrosoftOutlook
C: Dukumiintiyada iyo magaca isticmaalaha Codsiga DataMicrosoftOutlook
Wixii Windows XP ah, galka ayaa ah:
C: Magaca isticmaalaha AppDataLocalMicrosoftOutlook
Wixii Windows Vista ah, galka ayaa ah:
C: Magaca isticmaale Isticmaalaha Goobaha Degaanka Codsiga DataMicrosoftOutlook
Wixii Windows 7, galka waa:
Waxaad sidoo kale raadin kartaa faylka “*.ost”Kombiyuutarkaaga maxaliga ah si loo helo meesha feylku ku yaalo.
The OST feylku waa nuqulka deegaankaaga ee sanduuqaaga Exchange, oo ay ku jiraan dhammaan most macluumaadka isgaarsiinta shakhsiyeed ee muhiimka ah iyo macluumaadka, oo ay ku jiraan emayl, fayl, posts, ballamaha, codsiyada kulanka, xiriirada, liisaska qeybinta, howlaha, codsiyada howlaha, joornaalada, qoraalada, iwm dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan sanduuqaaga boostada ama faylalka qad la'aanta ah, tusaale ahaan, Serverka sarrifka ayaa burbura ama iskama kicin kartid cusbooneysiinta qad la'aanta ee serverka, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho DataNumen Exchange Recovery inuu ka soo kabsado dhammaan xogta ku jirta.
Microsoft Outlook 2002 iyo noocyadii hore waxay isticmaaleen mid duug ah OST qaab fayl oo leh xaddiga cabbirka faylka ee 2GB. The OST faylka wuu xumaan doonaa markuu gaaro ama ka bato 2GB. Waxaad isticmaali kartaa DataNumen Exchange Recovery si loo baaro cabbirka weyn OST fayl iyo u rogo feyl PST ah oo ku jira qaabka Muuqaalka 2003 ee aan lahayn xaddidaadda cabbirka faylka ee 2GB ah, ama u kala qaad dhowr faylal PST ah oo ka yar 2GB haddii aadan haysan Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya oo la rakibay.